WAR CUSUB: Dhageyso yaa kala Dhexgalay Maleeshiyaadkii Beledweyne ku dagaalamay Ciidan Qaran mise Ciidan Qabiil uu leeyahay ayaa kala dhexgalay ? – Kismaayo24 News Agency
WAR CUSUB: Dhageyso yaa kala Dhexgalay Maleeshiyaadkii Beledweyne ku dagaalamay Ciidan Qaran mise Ciidan Qabiil uu leeyahay ayaa kala dhexgalay ?
by Tifaftiraha K24 22nd May 2016 028
Iyadoo Magaalada Beledweyne uu Dagaal qaatay Mudo 4 Maalin uu ku dhexmaraayay Maleeshiyo beeleed ayaa maalintii shalay waxaa si rasmi ah Ciidamadaasi u kala dhexgalay maleeshiy beeleed ku abtirsata Gudoomiye ku xigeenka Arimaha Bulshada Gobolka Hiiraan.
Gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada ayaa sheegay in kadib markii ay ku guul dareysteen Ciidamada Amisom iyo kuwa Gobalka uu qaatay masuuliyada ah inuu Nabadeeyo Xaafadda Howl-wadaag oo dagaal ka socday wax ka badan Afar cisho,Dagaalada waxaa ku dhintay dad ka badan 20 Ruux.
Maleeshiyaad laga kala keenay tuulooyinka hiiraan ayaa ugu danbeyn shalay gelinkii danbe kala dhexgalay Kooxihii dagaalamay waaana lakala qaaday dhinacyadii dirirta u dhexeysay.
Gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada hiiraan oo Beeshiisa sheegay iney keeneen ciidankan ayuu ku sheegay tiradooda 300 waxaana uu tilmaamay iney jiraan Maleeshiyaad kale oo diyaar u ah wali iney xalka Beledweyn ka qeyb qaataan.
Sheekh Xuseen ayaa iska fogeeyay in awood milatari uu kula wareegay Baladweyn isagoona sheegay in maleeshiyaadkan ay ku koobnaan doonaan oo kaliya xal u raadinta colaada Beledweyn
Xaalada magaalada beledweyne ayaa saaka daggan inkastoo ciidamadii wali si rasmi ah lookala qaadin hadana waxaa jirta ifafaalo nabadeed.
Dadkii ku haray xaafada howlwadaag ee Beledweyne ayaa saaka isku dayaya iney barakacaan maadaama maalmihii ina dhaafay uusan dagaalka kala joogsan taas oo ka hor istaagtay iney barakacaan
Madaxweynaha soomaaliya ayaa habeen ka hor ku dhawaaqay in wafdi wasiira ah loo dirayo colaadda Gobalka oo dhowr jeer soo laalaabatay.
Halkaan Hoose ka Dhageyso Codka Gudoomiye kuxigeenka arrimaha bulshada hiiraan
TOP NEWS: Dhageyso Nuxurka Shirka Jaraa;id ee Xasan Shiikh uu ku Ansixiyay Hanaanka Doorashada Dalka iyo Qodobo Muhiim uu soo hadal qaaday
TOP NEWS: Akhriso Qodobadii Madaxweyne Xasan Shiikh uu ka soo Saaray Hanaanka Doorashada iyo Gobolka Banaadir oo Aqalka sare loo…
Guddoomiye Mursal Shiikh oo Kulan Muhiim ah la qaatay gudigga Madaxa Banaan ee Xuduudaha iyo federaalka ee Qaranka.
Dhagayso+ Sawiro:- Labo Askari oo Maanta lagu toogtay Magaalada Muqdisho